Jose Mourinho oo caro kala dul dhacay xiddigaha Man United kaddib guushoodii xalay – Gool FM
Jose Mourinho oo caro kala dul dhacay xiddigaha Man United kaddib guushoodii xalay
(Manchester) 13 Sebt 2017. Man United ayaa waqti kaddib ku soo laabatay tartanka Champions League iyadoona guul wayn ka gaartay kooxda Basel oo ay 3-0 ku mareen.
Balse Jose Mourinho ayaa caro kala dul dhacay kooxdiisa isagoona ku eedeeyay inay u ciyaarayeen si khiyaali ah sida Playstation oo kale isla markaana aysan tix galin u muujin xiddigaha ka soo horjeeda.
Wuxuu macallinka reer Portugal sheegay inay kooxdiisa Badeelaha ka keceen markii ay ciyaartu gaartay 2-0.
“Kaddib 2-0 wax kasta way is badeleen, waxaan joojinay inaan si dhab ah u ciyaarno waxaan kaloo joojinay inaan sameyno go’aamada saxda ah,” Jose ayaa sidaa ku waramay.
“Dhibaato ayaan gacmaheena isugu geysan karnay.
“Waxaan ciyaareynay kubbad khiyaali ah, kubbada Playstation-ka.
“Sida cad ciyaartoyda waxay dareemeen inay ciyaarta gacantooda kujirto balse waa inaad tix galisaa kuwa kaa soo horjeeda, qaabkii ayaan luminay, nasiino badan ayayna sameeyeen ciyaartoyda mana ka helo midaa.”.
"Messi waa mid aan la jooji karin" - Allegri oo amaanay Messi kadib guul daradii uu u gaystay kooxdiisa
Miralem Pjanic oo hoos u dhigay saamaynta guul daradii ka soo gaartay Barcelona